ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊လူတိုင်းကလိုလားပျော်မွေ့ချနိုင်မှအရည်အသွေးကောင်းအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအပေါ်မိမိတို့ကွန်ပျူတာ၊ဒါပေမယ့်အချိန်၊သင်သည်လည်းဖြစ်ချင်စဉ်းစားရန်တတ်နိုင်ကစားခေါင်းစဉ်၏သက်သာခြင်းမှသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်း။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်သင်ပြောပြသွားတာပါကြောင်းအားလုံးမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်း:အတွေးဦးတည်သင်ဖြစ်ကောင်းဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ချက်ချင်းသင်ခံစားရလျှင်သင်ကဲ့သို့အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြှုပ်နှံဖို့ကမ္ဘာ့အတန်းအစား XXX။, ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ဤဂိမ်းအဘို့အတော်လေးအချိန်အတန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့လိုထဲကလူတွေကအဲဒီမှာတစ်ခုခုတော့သူတို့ကယ့်ကိုသူတို့ထဲသို့သူတို့သွားနစ်မြုပ်–အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသောအခါအဝေးထက်ကျော်လွန်၎င်းတို့၏ရလဒ်တွေအိပ်မက်နှင့်အပြည့်အဝပြီးဆုံးသူတို့၏အလိုဆန္ဒမှကြွလာသောအခါနှိုးဆှထုတ်။, သင့်ဖော်ပြအစမှဤနေရာသူများကဖန်တီးနှင့်အတူမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားစိတ်–ေလးထိုဆန္ဒများ၏လူအပေါ်လျစ်လျူရှုကြောင်းပြသခဲ့ပြီးမှဒီဘက်အသိုင်းအဖြစ်လက်ခံ၊နှင့်ကျွန်တော်ပေးချင်တတ်နိုင်သမျှလူများစွာအခွင့်အလမ်းအားကစားကားဂိမ်းအပေါ်မိမိတို့ဖုန်းအကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်သူတို့စဉ်းစားဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤအသံတူအမျိုးအစားအကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်၊ပေါ်ဖတ်ရန်အဘို့အပိုအသေးစိတ်အရာကိုအပေါ်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအကျင့်ကိုကျင့်ကိုဖန်တီးရန်အဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ကိုင် XXX အလှန်အချာ။, လုံလောက်ကြောင်းပြောသွားအထက်နှင့်ကျော်လွန်တာဝန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုပေးရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်။
အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်အတူဂိမ်းအတွက်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအကြောင်းအန္းနှင့် iOS အခြေခံအားဖြင့်လွှမ်းမိုးမြင်ကွင်းတစ်ခု၊မများမှာအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားအောင်သေချာသောအရွယ်ရောက်ပြီးစီမံကိန်းအောင်မြင်။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကလုပ်နေမှာမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းသည်သေချာအောင်လုပ်တာ antifragile နှင့်အနိုင်အမှုအရာသို့အနာဂတ်–အယူအဆကလူအများကြီးယူမယ်လို့ခွင့်ပြုဘို့အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းကစား။, ကျွန်မတို့ရရှိအောင်ဤသည်အားဖြင့်ကုန်တင်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတဆင့်ရာက္ဇာမူဘောင်၊အရာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်သင်နိုင်ကစားရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမှတဆင့်အကြိုက်များ၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ။ နည်းပညာပိုင်းအဖြစ်နိုင်မယ့်အခြားသောဘရောက်ဆာများအလုပ်လုပ်ရန်ဒီမှာပါ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြံပြုသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်သင်အမြဲအာမခံမယ့်ကြီးမြတ်အချိန်ရှိသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်။, ကျွန်မတို့လည်းထောက်ပြနိုင်ကစားဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်ဖြန့်ချိကွန်ပျူတာသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်–တဖန်ကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ဟာအရာအားလုံးအားဖြင့်၊နီးပါးမည်သူမဆိုနှင့်အတူတက်ကြွစွာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းသွားမခွဲခြားဘဲ၎င်းတို့၏တိကျတဲ့တည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြေအနေ။ ဒီကပဲအနိုင်ချင်ဖြေရှင်းရန်အမှုအရာအနာဂတ်အတွက်ဤသို့ဝေးတွေ၊မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းသည်အလွန်ကောင်းစွာပြုချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူသွားနိုင်ပါပြီ!
သင်သို့အမာခံစအိုလိင်? ကောင်းစွာအဘို့အကောင်းသတင်းအကြောင်းကျွန်တော်အများအပြားရှိသည်မြည်းသံုးေခေါင်းစဉ်အတွင်းမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ ကျနော်တို့လည်းတစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူး Latina လွှတ်ပေးလျှင်သင်ကြိုက်မွာင္ၿပန္လာေနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသော asses၊သို့မဟုတ်စာမျက်နှာများဆိုရင်ခင်ဗျားအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်မှာရိုင်းနှင့်ယုတ်။ ကျွန်တော်ပြောအများဆုံးလူများအတွက်ပြောတဲ့အခါပိုအမျိုးမျိုးရဲ့အပေါ်စားပွဲပေါ်မှာ၊ပိုကောင်း။, ကျွန်တော်လုပ်ချင်ဒါဟာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းသင်တာအရမ်းအသည်းအသန်အကြောင်းပေးခြင်းအားလံုးစားတစ်ခုခုသူတို့ခံစားနိုင်မယ်ဆိုရင်၊ကြောင်းမသွားဆိုလိုတယ်၏အနားမှအသိဝဠာကိုအကောင်းဆုံးထွက်ရောက်စေဆှဘော်ဖြစ်နိုင်–ဒါကြောင့်ဖြစ်! ကျွန်တော်တို့မသွားခွင့်ပြုရန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမှနောက်ကွယ်မှလဲကြဘယ်နေရာကျနော်တို့နိုင်ခုခံတွန်းလှန်၊ဒါကြောင့်သင်အလောင်းအစားနိုင်အောက်ခြေလႊတ္ေတာ္အသင်းမှာမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအစဉ်အမြဲသင်၏အကျိုးနှင့်ကာမဂုဏ်စိတ်ကူးအနက်မှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းဖန်တီး။, ကျော်နှင့်အတူ ၆၆ ခေါင်းစဉ်ပြီးသားအတွင်းပိုင်း၊သင်အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေမသွားနိုင်နှင့်အတူအဆိုပါစာကြည့်တိုက်ကျနော်တို့ပြီးသားဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲ–မဖော်ပြထားခြင်း ၁၀ အသစ်ခေါင်းစဉ်ကျနော်တို့ထည့်တိုင်း ၆ လ!
ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုပြောသည်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်အရာအားလုံးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်:သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏အသံအဘယ်သို့ဤအကြောင်းကိုအားလုံး၊ငါသည်အမြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုသောအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ရတယ္ ကျွန်မတို့ဟာတစ်ပြည်နယ်အတွက်အကြွင်းမဲ့ဂိမ္းပြည့်စုံအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးယူသွားနေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သမျှဘို့! နှောင့်နှေးကြပါဘူးသို့မဟုတ်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာမှာ:အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကြာကိုယ့်တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့အမှန်တကယ်နေကြတယ်ရှငျဘုရငျတို့၏ဤအာကာသ။, ဒါကြောင့်ကစားအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်နိုင်ညာဘက်မှာကျနော်တို့ရှိသည်လိမ့်မယ်သင်ရိုက်ကူး၏ကြိုးစေးကပ်ပည္ဆိုင္ရာအတွက်အချိန်မှာအားလုံး။ ရတစ်သျှူးကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်တာပေါ့။